တံပွန်းခရိုင်ခွဲ - ဝီကီပီးဒီးယား
လေတန်ပွန်း သို့မဟုတ် တန်ပွန်း နှင့် မရောထွေးပါနှင့်။
တံပွန်း (ထိုင်း: ตำบล, အသံထွက် [tām.bōn])ထိုင်းနိုင်ငံရှိဒေသဆိုင်ရာအစိုးရအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်သည်။ အောက်ပိုင်းခရိုင်(ကုန်းတွင်းပိုင်း)နှင့်ပြည်နယ် (ချောင်းဝ်)တို့ကတတိယအုပ်ချုပ်ရေးဌာနခွဲအဆင့်ကိုဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ ၂၀၁၆တွင်တန်ပွန်းပေါင်း ၇,၂၅၅ ရှိခဲ့သည်။ တူညီသောအုပ်ချုပ်ရေးအဆင့်မှာသတ်မှတ်ထားသည့်ဘန်ကောက်၏၁၈၀နယ်ခွဲအပါအဝင်မဟုတ်၊ ထို့ကြောင့်တိုင်းခရိုင်ဆယ်ခုမှတန်ပွန်းရှစ်ခုပါရှိသည်။ တန်ပွန်းကိုများသောအားဖြင့် "မြို့နယ်" သို့မဟုတ် "ဌာနခွဲ" အဖြစ်—အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်ပြန်ဆိုလေ့ရှိပြီး၊ ဘုရင်လှေခါးထစ်အတွက်လည်းမကြာခဏအသုံးပြုသော်လည်းခရိုင်ခွဲကိုထိုင်းဘုရင်ဌာနခွဲရုံးအဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်။ တန်ပွန်းကိုနောက်ထပ်တန်ပွန်းနှုန်းတစ်ဆယ်လောက် ၆၉,၃၀၇ ကျေးရွာပေါင်း(မူးဘန်)သို့ခွဲခြားနိုင်ပါသည်။ မြို့ကြီးများနှင့်မြို့များအတွင်းရှိတန်ပွန်းများကိုကျေးရွာများအဖြစ်ခွဲခြား၍မရသော်လည်းချွန်းဖွန်း(ချွန့်ချွန်း)ဟုခေါ်သည့်တရားဝင်အသိုင်းအဝိုင်းများရှိနိုင်သည်။
၁.၂ ဌာနခွဲအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ (အော်ပေါ်တော်)
ပုဒ်မခွဲအနေဖြင့်တန်ပွန်းသည်ရှည်လျားသောသမိုင်းကြောင်းရှိသည်။ ၁၉ ရာစုရှိပြည်နယ်မြို့မှအုပ်ချုပ်သောဒေသဒုတိယအဆင့်ခွဲဖြစ်သည်။ ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအသိုင်းအဝိုင်းအကြီးအကဲတစ်ဦးကိုကံနန်သို့မဟုတ်ဖာန်အဖြစ်ခန့်အပ်ခဲ့သည်။ ပထမအကြိမ်ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးမင်းသားတန်မလုံရာချာနုဖက်လက်အောက်တွင် ၁၈၉၂ ခုနှစ်တွင်စတင်ခဲ့သည့်အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများတွင်ပြည်နယ်များကဏ္ဍခွဲ ၃ ခုအားဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
အကျယ်တဝင့် ဖော်ပြထားသောဆောင်းပါး - မူးဘန်
အဆိုပါဌာနခွဲများကိုအုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာကျေးရွာများ (မူးဘန်หมู่บ้าน)အဖြစ်အနိမ့်ဆုံးအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းခွဲခြားထားသည်။ အများအားဖြင့်ထိုအုပ်ချုပ်ရေးရွာနံပါတ်တစ်ခုဖြင့်အမှန်တကယ်အမည်ထက်ပိုမိုရည်ညွှန်းလေ့ရှိသည်။ အထူးသဖြင့်အုပ်ချုပ်ရေးရွာတစ်ရွာတွင်အခြေချမှုတစ်ခုထက်ပိုသောသို့မဟုတ်ကြီးမားသောအခြေချနေထိုင်မှုကိုအုပ်ချုပ်ရေးရွာတစ်ရွာထက်ပို၍ခွဲဝေခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါဌာနခွဲအကြီးအကဲ(ကံနန်)ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရသည့်ကျေးရွာခေါင်းဆောင်တစ်ဦးသည်ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖြစ်ရွေးချယ်ခံရသည်။
တန်ပွန်းကောင်စီနှင့်တန်ပွန်းအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာအက်ဥပဒေ(၁၉၉၄)ယင်းအရွယ်အစားနှင့်အခွန်ဝင်ငွေပေါ်မူတည်၍တန်ပွန်းသည်ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့မှအုပ်ချုပ်နိုင်သည် (အော်ပေါ်တော်သို့မဟုတ်အာဘစ်ထိုင်း: องค์การบริหารส่วนตำบล, romanized: องค์การบริหารส่วนตำบลဒါမှမဟုတ်တန်ပွန်းကောင်စီ(TC, ထိုင်း: สภาตำบล)။ သို့သော် ၂၀၀၁ ခုနှစ်မှစ၍တန်ပွန်းကောင်စီများအားလုံးကိုတန်ပွန်းအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များသို့အဆင့်မြှင့်တင်ခဲ့သည်။ အာဘစ်ကောင်စီသည်အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာကျေးရွာတိုင်းမှကိုယ်စားလှယ်နှစ်ဦးနှင့်တိုက်ရိုက်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရသည့်သမ္မတတစ်ဦးတို့ပါဝင်သည်။ စည်ပင်သာယာရေး(ကရေပီ)ပိုင်တန်ပွန်းဧရိယာစည်ပင်သာယာကောင်စီကအုပ်ချုပ်သည်။
အကျယ်တဝင့် ဖော်ပြထားသောဆောင်းပါး - တန်ပွန်းတစ်ခုဒေသထွက်ကုန်တစ်ခု
၂၀၀၁ ခုနှစ်တွင်ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်သက်ဆင်ရှင်နာဝပ်သည်တန်ချိန်တစ်မျိုးစီတိုင်းအတွက်ပုံမှန်ထူးခြားသည့်ဒေသထွက်ကုန်ပစ္စည်းကိုရွေးချယ်မည့်စီမံကိန်းကိုစတင်ခဲ့သည်။ ထို့နောက်စီမံကိန်းသည်ထုတ်ကုန်ကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့်ထုတ်လုပ်မှုကိုခေတ်မီစေရန်ကူညီခဲ့သည်။ အိုးထောလ်ထုတ်ကုန်များရောင်းချသောဆိုင်များသည်ပြည်နယ်မြို့တော်တစ်ခုစီ၌တည်ရှိသည်။
↑ ၂၀၁၆ပညာရေးစာရင်း။ ၅လ ဩဂုတ် ၂၀၁၈ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၂၀၁၈အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ။ ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန။ မေလ ၂၀ ရက် ၂၀၀၉ တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
↑ ထိုင်း၊အင်္ဂလိပ် ကျန်ဝ့၊ အမ်ဖေ၊ ဘုရင်ကုန်းတွင်းပိုင်းနှင့်တန်ပွန်းတို့ကူးယူဖော်ပြချက်။ ISBN ၉၇၈-၉၇၄-၇၈၅၇-၀၄-၇ |isbn= တန်ဖိုး invalid character စစ်ဆေးရန် (အကူအညီ)။ 2009-01-20 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ [လင့်ခ်သေ]
↑ "th พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗" (in th) (၁၉၉၄-၁၂-၀၂). ဘုရင်တော်ဝင်အစိုးရပြန်တမ်း ၁၁၁ (၅၃ ခ): ၁၁–၃၅.
http://www.thaitambon.com/English/AboutTTB.htm Archived 19 October 2020 at the Wayback Machine.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=တံပွန်းခရိုင်ခွဲ&oldid=685858" မှ ရယူရန်
၂၀ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၈:၂၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၀ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၈:၂၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။